भारतबाट बिरुवा ल्याउन नसक्दा रबर खेती विस्तार प्रभावित | Investopaper
झापा । कोरोना महामारीका कारण भारतबाट बिरुवा ल्याउन नसक्दा झापा जिल्लामा यस वर्ष रबर खेती विस्तार हुन सकेको छैन । झापा, इलाम, सुनसरी र मोरङमा प्राकृतिक रबरको खेती हुँदै आएको छ ।
मुलुकभित्रै पर्याप्त बिरुवा उत्पादन नगरिएको र महामारीले नाका बन्द हुँदा भारतबाट बिरुवा भित्र्याउन नसक्दा रबर खेती विस्तार कार्यक्रम प्रभावित बनेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना एकाइ भद्रपुरका प्रमुख रवीन्द्र सुवेदीले जानकारी दिनुभयाे ।
रबर जोन कार्यक्रममार्फत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २० हेक्टर जग्गामा रबर खेती विस्तार गर्ने लक्ष्य थियो । बिरुवा अभावमा तीन हेक्टरमा मात्र खेती विस्तार भएको उनले बताउनु भयाे । नेपालमा भारतको आसामबाट रबरको बिरुवा ल्याउने गरिएको थियो । सीमानाका बन्द भएकाले यस वर्ष भारतबाट बिरुवा नआएको सुवेदीले जानकारी दिनुभयाे । भद्रपुरको एग्रो फरेस्ट कम्पनीले उमारेको रबरको बिरुवासमेत मरेको उहाँले बताउनु भयाे ।
भद्रपुरको नर्सरीले गत आवमा ५० हजार बिरुवा उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर आठ हजार मात्र उत्पादन गर्न सफल भएको उहाँको भनाइ छ । रबरको बिरुवा जेठभित्र रोपिसक्नुपर्ने हुन्छ । असार महीनासमेत बितिसकेको हुँदा अब खेती विस्तारका लागि अर्को वर्ष पर्खिनु पर्नेछ ।
रबर जोन सञ्चालक समितिका अध्यक्ष शान्तिराम चिमिरियाले हाल भापामा ५०० हेक्टर क्षेत्रफलमा रबर खेती गरिएको तर २५५ हेक्टर रबर खेतीमात्र परियोजनामा सूचीकृत भएको बताउनु भयाे । रबर बहुवर्षीय बाली भएको हुँदा किसानले धान खेत र चिया बगान मासेर यसको खेती गर्दै आएका छन् । परियोजनाले जनाएअनुसार रबर खेती भइरहेको कुल जग्गामध्ये ६० प्रतिशत धान मासेर, १२ प्रतिशत चिया मासेर र २८ प्रतिशत बाँझो जग्गामा लगाइएको हो ।
परियोजनाको रू. १० लाख, मेचीनगर नगरपालिकाको रू. पाँच अनुदान र कम्पनी आफैँले रू. पाँच लाख लगानी गरेर नसरी स्रोत केन्द्र स्थापना गरेको हो । जहाँ रबरको पाँच हजार बिरुवाको नर्सरी राखिएको छ । गत आवमा तीन हेक्टर क्षेत्रमा गरिएको रबर नर्सरी चालू आवमा विस्तार गरिने कम्पनीका कोषाध्यक्ष योगेश भट्टराईले बताउनु भयाे । कम्पनीले पाँच हजार बिरुवा रोपिसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयाे ।
आगामी दिनमा बिरुवामा आत्मनिर्भर बनाउन परियोजनाले रबर खेतीमा लागेका निजी क्षेत्रसँग साझेदारीमा नर्सरी सञ्चालन गर्ने र तिनीहरुलाई अनुदान प्रदान गर्ने नीति लिएको छ । (रासस)
← नेपाल टेलिकमकाे समर अफरमा थप सुविधा
प्रधानमन्त्री देउवा आजै विश्वासको मत लिँदै →